Moto Morini Kanguro and Dart – Classic Motorcycle Roadtest – RealClassic.co.uk | Mootooyinka buugga la caddaymaha, sawiro, ratings, dib u eegista iyo discusssions
ATV Source - War-Saxaafadeed - NAC ee / Cannondale Booska ... (32392)
'01 1500 FI Drifter, dhimbiil no - Forums Kawasaki (10537)
MZ Notes - Philadelphia Riders-Leaks (8895)
Notes on nooc Relay EFI (digniin: Caajis iyo caajis ... (8840)
Xigeenka Racing shidaalka News Latest: Xigeenka barayaa UNLEADE ... (8320)
Kawasaki ZXR 750 - Reviews mootooyin, News & Advi ... (7050)
Honda Wave 125 Dayactir Buugga Milkiilayaasha Guide Books (6867)
Peugeot Speedfight 2 Workshop Milkiilayaasha Buugga Hagaha ... (6744)
Ma Yamaha horumarinta wax soo saarka ah Tesseract? RideA ... (6380)
House iyo Nabi Luudh in Pampanga Solana Karylle Country H ... (5358)
KTM Duke 125/200 heli afte RaceDynamics PowerTRONIC ... (5260)
Barbardhig Royal Enfield Classic 350 vs cl ... (4853)
Home → Moto Morini → Moto Morini Kanguro and Dart - Classic Baaskiilka Roadtest - RealClassic.co.uk
20 Jun 2015 | Qoraa: DIMA | Comments Off on Moto Morini Kanguro iyo Dart – Classic Baaskiilka Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro iyo Dart
Most people tend to plump for one of the well-known Morini Sport or Strada models. Laakiin at darafyadiisa ka soo horjeeda ee heerka aad ka heli doontaa Dart ah super-sac oo qurxoonayd oo ku rufty-tufty Kanguro. Haddaba sidee sameeyey Ken Philp timaado in labada leedahay?
marka hore waxaan arkay Kanguro a at Maxkamadda Earls in 1982, oo la dhacay sida ay ahayd off-road V-mataanaha. Waxaan u lahaa dhibaato caafimaad ee 1984, si helay takhaluso dhawr baaskiilada iyo this mid iibsaday, Kanguro ugu horreeyey oo NLM lahaa dukaanka.
Waxa kaliya sii mar kasta oo aan u doonayay in ay! Waxa uu i siiyay BADAN a raaxaysi off-road, in kasta oo ay miisaan, oo waxaan ahay shortie a – 5'5. Waxa kaliya ee aan helay laga takhaluso waxaa ka mid ah in 2003 maxaa yeelay, waxaan keliya oo 15% awoodda sambabka hadda.
Ma dhihi karo waxaa jiray wax kasta oo anigu ma aan jeclaan ku saabsan. Waxaan u isticmaalaa enduros, raad-saaran, Weston Beach Race, tijaabooyin long-distance, iyo wixii la mid ah, oo mar daboolay 720 miles in 20 saacadood on dhacdo MCC ah.
Guud ahaan waan daboolay oo ku saabsan 16,000 miles. Ma jirin wax dhibaato ah oo dhab ah, oo kaliya kuwa la jiray qaladkeyga!
Qof kasta iibsato Kanguro ah waa in si cad ah ee X-daydo. The X1 iyo X2 leeyihiin loox embriyaha, iyo dildilaaca X yiilleen meesha ugu footrest xaq u. X1 wuxuu leeyahay xoojinta waxaa.
laambad waa kaliya AC iftiin toos ah, si wax soo saarka kala duwan yihiin xawaare engine. Sidoo kale nidaamka nalalka 6-volt a, la batari aad u yar!
Sidaas, isagoo leedahay Kanguro ka cusub, run ahaantii aad ayaan ugu dhicin motor ka. Oo haddana waxaan arkay sawirka Dart cusub ee saxaafadda, and wasn’t too impressed – until I saw one close-up at the Earls Court Show in 1998. I positively DROOLED!
2014 Moto Morini Rebello 1200- Review Fiiri First- photos
Qoraalada kale ee ka mid ah qaybta "Moto Morini":
2008 dib u eegista mooto Moto Morini Corsaro Avio @ ...
02.06.2015 | Comments Off on 2008 Moto Morini Corsaro Avio dib u eegis mooto @ Top Speed
Royal Enfield rasaas 500 classic Bike Kawasaki ER-6n Suzuki B-King Final string Honda Goldwing noocooda M1 Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Fikradaha Moto Guzzi 1000 Daytona duritaanka Harley Davidson-Janumet 1200 Fikradda Suzuki AN 650 Ducati Desmosedici GP11 Suzuki B King Fikradaha Bike Kawasaki Square Afar Brammo Enertia Suzuki Colleda CO Aprilia Mana 850 Honda DN-01 Indian Chief Classic Bajaj Baro Ducati Diavel MV Agusta 1100 Grand Prix In mooto Honda eScooter smart Honda X4 Low Down Ducati 60 KTM 125 Fikradaha Race mootooyinka Honda Dream Kids Dokitto